8 Khona-ke amadoda akwa-Efrayimi athi kuye: “Yini le osenzé yona ngokungasibizi lapho uyolwa noMidiyani?”+ Futhi azama ngamandla ukuxabana naye.+ 2 Ekugcineni wathi kuwo: “Ngenzeni manje uma ngiqhathaniswa nani?+ Ayingcono yini imikhothozo yakwa-Efrayimi+ kunokubuthwa kwamagilebhisi kwase-Abhi-ezeri?+ 3 UNkulunkulu uzinikelé esandleni senu izikhulu zakwaMidiyani u-Orebi noZebi,+ futhi yini engikwazile ukuyenza uma ngiqhathaniswa nani?” Yingaleso sikhathi lapho umoya wabo ngaye wazola khona lapho ekhuluma leli zwi.+ 4 Ekugcineni uGideyoni wafika eJordani, waliwela, yena namadoda angamakhulu amathathu ayekanye naye, bekhathele kodwa beqhubeka nokubajaha. 5 Kamuva wathi emadodeni aseSukoti:+ “Sizani niphe abantu abalandela izinyathelo zami+ izinkwa eziyindilinga, ngoba bakhathele futhi ngijaha uZeba+ noZalmuna,+ amakhosi akwaMidiyani.” 6 Kodwa izikhulu zaseSukoti zathi: “Ingabe izintende zezandla zikaZeba noZalmuna sezisesandleni sakho kakade kangangokuba ibutho lakho+ sekumelwe linikwe isinkwa?” 7 Khona-ke uGideyoni wathi: “Yingakho kuyothi lapho uJehova enikela uZeba noZalmuna esandleni sami, ngokuqinisekile ngibhule inyama yenu ngameva asehlane nangobobe.”+ 8 Waqhubeka nendlela yakhe wenyuka esuka lapho walibangisa ePhenuweli+ futhi wakhuluma nabo ngale ndlela efanayo, kodwa amadoda asePhenuweli amphendula njengoba nje amadoda aseSukoti ayemphendulile. 9 Ngakho wathi nasemadodeni asePhenuweli: “Lapho ngibuya ngokuthula, ngizowudiliza lo mbhoshongo.”+ 10 UZeba noZalmuna+ babeseKarkori, amakamu abo ekanye nabo, kusele abangaba yizinkulungwane eziyishumi nanhlanu kuphela kulo lonke ikamu labaseMpumalanga;+ futhi labo abase bewile kakade babengamadoda ayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili ayehosha inkemba.+ 11 UGideyoni waqhubeka wenyuka ngendlela yalabo abahlala ematendeni walibangisa empumalanga yeNoba naseJogibeha+ waqala ukuligalela ikamu, lapho ikamu lingaqaphile.+ 12 Lapho uZeba noZalmuna bebaleka, khona manjalo wabajaha futhi wawathumba la makhosi amabili akwaMidiyani, uZeba noZalmuna;+ wenza lonke ikamu lathuthumela. 13 UGideyoni indodana kaJowashi waqala uhambo lwakhe olubuya empini ngensungubezi enyukela eHeresi. 14 Endleleni wathumba insizwa ethile yamadoda aseSukoti+ wayibuza.+ Ngakho yambhalela amagama ezikhulu+ zaseSukoti namadoda akhona amadala, amadoda angamashumi ayisikhombisa nesikhombisa. 15 Ngakho waya emadodeni aseSukoti wathi: “Nampa oZeba noZalmuna ebeningiklolodela ngabo, nithi, ‘Ingabe izintende zezandla zikaZeba noZalmuna sezisesandleni sakho kakade ukuba kunikwe amadoda+ akho akhathele isinkwa?’” 16 Khona-ke wathatha amadoda amadala omuzi nameva asehlane nobobe, futhi ngawo, wawafundisa isifundo amadoda aseSukoti.+ 17 Wawudiliza+ umbhoshongo wasePhenuweli,+ wabulala abantu bomuzi. 18 Manje wathi kuZeba nakuZalmuna:+ “Babeluhlobo luni lwabantu labo enababulala eThabori?”+ Bathi: “Njengoba wena unjalo, nabo babenjalo, ngamunye wayenesimo esinjengesamadodana enkosi.” 19 Khona-ke wathi: “Babengabafowethu, abantwana bakamama. Kuphila kukaJehova, ukube nabalonda, bekungeke kudingeke ukuba nginibulale.”+ 20 Khona-ke wathi kuJetheri izibulo lakhe: “Sukuma, babulale.” Le nsizwa ayizange iyihoshe inkemba yayo, ngenxa yokuthi yayesaba, ngoba yayisencane.+ 21 Ngakho uZeba noZalmuna bathi: “Sukuma wena usihlasele, ngoba amandla+ endoda anjengendoda ngokwayo.” Ngakho uGideyoni wasukuma futhi wababulala+ oZeba noZalmuna wathatha imihlobiso emise okwenyanga eyayisezintanyeni zamakamela abo. 22 Kamuva abantu bakwa-Israyeli bathi kuGideyoni: “Sibuse,+ wena nendodana yakho nomzukulu wakho ngokufanayo, ngoba usisindisile esandleni sikaMidiyani.”+ 23 Kodwa uGideyoni wathi kubo: “Mina angiyikunibusa, nendodana yami ayiyikunibusa.+ UJehova nguye ozonibusa.”+ 24 UGideyoni waqhubeka wathi kubo: “Mangenze isicelo kini: Nginikeni, yilowo nalowo kini, indandatho yegolide yasekhaleni+ empahleni yakhe ayidlile.” (Ngoba babenezindandatho zegolide zasekhaleni, ngoba babengabakwa-Ishmayeli.)+ 25 Khona-ke bathi: “Sizokunika zona ngokuqinisekile.” Ngakho bandlala isiphuku futhi baphonsa kuso yilowo nalowo indandatho yegolide yasekhaleni yempahla yakhe ayeyidlile. 26 Isisindo sezindandatho zegolide zasekhaleni ayezicelile saba amashekeli egolide ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa, ngaphandle kwemihlobiso emisé okwenyanga+ namacici nezingubo zoboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu+ okwakusemakhosini akwaMidiyani nangaphandle kwemigexo eyayisezintanyeni zamakamela.+ 27 UGideyoni wakwenza kwaba i-efodi+ futhi wabukisa ngalo emzini wakubo wase-Ofira;+ wonke u-Israyeli waqala ukuziphatha kabi ngokobulili nalo lapho,+ kangangokuba laba ugibe kuGideyoni nasendlini yakhe.+ 28 Kanjalo uMidiyani+ wanqotshwa phambi kwabantwana bakwa-Israyeli, futhi akabange esaliphakamisa ikhanda lakhe; izwe alibanga naso esinye isiphazamiso iminyaka engamashumi amane ezinsukwini zikaGideyoni.+ 29 UJerubhali+ indodana kaJowashi wahamba, wahlala endlini yakhe. 30 UGideyoni waba namadodana angamashumi ayisikhombisa+ aphuma enyongeni yakhe, ngoba waba nabafazi abaningi. 31 Isancinza sakhe esasiseShekemi, naso samzalela indodana. Ngakho wayiqamba ngokuthi u-Abhimeleki.+ 32 Ekugcineni uGideyoni indodana kaJowashi wafa eseguge ngokwanele futhi wangcwatshwa endaweni yokungcwaba kaJowashi uyise e-Ofira lama-Abhi-ezeri.+ 33 Kwathi ngokushesha nje ngemva kokuba uGideyoni esefile abantwana bakwa-Israyeli baphinda baziphatha kabi ngokobulili nawoBhali,+ baze bamisa uBhali-bheriti njengonkulunkulu+ wabo. 34 Abantwana bakwa-Israyeli abazange bamkhumbule uJehova uNkulunkulu+ wabo, owayebakhululile esandleni sazo zonke izitha zabo ezazibazungezile;+ 35 futhi abazange bayibonise umusa wothando+ indlu kaJerubhali, uGideyoni, ngabo bonke ubuhle ayebenzelé u-Israyeli.+